Caafimaad Darrooyinka Moobaylku Dhaliyo iyo Daawooyinkooda | Dhamays Media Group
Inta badan dadka dunida ku nool waxay isticmalan telefoonnada casriga ah, balse qof kasta lama socdo caafimaad darrada jidhka ay u geysan karaan iyo siyaabaha lagaga gudbo dhibaatada moobaylka.
Haddaba, khubaro caafimaado oo kala duwan oo wax ku daabaca wargeysyada caafimaadka ayaa dhibaatooyinkan iyo xalalkooda soo gudbiye, waxaanay u dhigeen sidan:
Indhaha oo Shiikha
Haddii qofku uu dareemo indhaha oo olal ka baxo marka uu qofku telefoonka eego, waxa hubaal ah in qofka ay ku soo fool leedahay xannuun indhaha kaga dhaca oo dhalin kara caabuq iyo olal badan.
Telefoonnada gacantu waxay si ba’an u saameeyaan indha carruurta, waliba dhibtay sababaan waa mid aan waligood ka hadhin.
Mr. Allon Barsama oo ah khabiir qalliinka indhaha kaga hawlgala Jaamacad cusbitaaleedak Kuton & Dunstable University Hospital ayaa sheegay in ubadka yar yare e aad u isticmaala telefoonku aragtidodu daciifto.
Sidoo kale cilmi la sameeyeen khubarada Jaamacaddan ayaa soo jeedisay in isticmaalka telefoonnada la yidhaa Smartphones qofka aragtida ka dilaan.
Xalka dhibaatadan: qofku waa inuu iska waaweyneeya qoraalka telefoonkiisa, waana inuu ka taxadira inuu si dhaygaga u eego muraayada moobaylka.
Sidoo kale, qofku waa inuu telefoonka ku isticmaala qol laydhkiisu dheeli tiran yahay, isla markaana aanu isticmaalin wax ka badan 15 daqiiqo markiiba.
Ugu bayntii, shaahadaha ubadku aadka u dawadaan waxay ku kelifta cudurro badan oo ay ka mid yihiin buurnida xad-dhaafka iyo wadno-xannuunka.
Laf-dhabarta oo uu khatar ku keeno
Moobilada casriga ah waxay beddelaan dhaqdhaqaaqa xubno jidhka ka mid ah sameeyo, sababtoo ah jidhka bani’aadamku wuxuu la qabsada camada joogtada ah ee qofku samaynaayo sida ay xaqiijsiay Kirsten Lord oo ah khabiirad cudurrada jidhka ku dhaca ah.
“Waxaan ogahay in dad badan garaac ka soo wajaho luqunta iyo garbaha, dadku markay wax akhriyayaan waxay gacmahooda ku qabtaan dhabarka, tana waxa laga yaaba inay dhaawac u keento laf-dhabarta, neerfisyadanacadaadis saarto, natiijada ka dhalatana waxay noqota madax-xannuun iyo in qofku laf-dhabartu xannuunto, daalna uu dareemo,” ayey tihdi Kiristen Lord.
Xalka caafimaad: Kristen waxay soo jeedisay in qofku jimicsi badan sameeyo oo xagga muruqyada luqunta ah, dhaqdhaqaaqa badiyo inta uu ku jiro hawsha akhrinta si aan dhib caafimaad u soo gaadhin.
Qofku marka uu muraayada telefonka in badan wejiga ku hayo ee uu muddo dheer qof la hadlo waxa ka soo yaaca dhidid sababa finan isu beddela cambaar.
Jariirada la yidha Which oo tijaabo arrintan ku saabsan ka qaaday 30 qof oo moobaylada aad u isticmaala ayaa caddeeyey in celcelis ahaan 18 jermis qofka ka qaado telefoonka uu muddada dheer ku hadlo.
Xalka caafimaad: Haddii jidhkaagu u nugul yahay finanka sameecada dhegaha isticmaal amma telefoonka iskaga shub dareero milix leh si aanad cambaar u qaadin.
Dhaawac soo gaadha maqalka
In telefoonka lagu dhegaysto heeso aad u dalacan waxay sababaan in maqalka qofka dhaawac soo gaadho amma uu diciifo, sidoo kalene qofku markuu muddo dheer telefoonka ku hadlo waxa halis gala durbaanka maqalka codka, sida ay xaqiijisay Karen Finch oo ka tirsan Xarunta daryeelka maqalka ee Ipswich.
Xalka caafimaad: Iska dheeli tir codka telefoonka haddii aad ku hadlayso iyo haddii aad wax ku dhegaysanaysaba, si aan dhaawac u soo gaadhin maqalkaaga, sababtoo ah jabaqda kala duwan waxay halis gelisa dhegaha bani’aadamka.
Waxa Laga qaada hurdo la’aan
Telefoonnada, kombuyuutarada iyo qalabada kale ee shaashada ifaysa leh waxa bixiyaan shucaac iyio laydh waxyeela hormoonka Melatonin oo qofka ka caawiya inuu hurdo dareemo amma si dhakhso ah u seexda, kadib arrintaasina waxay sababtaa dhibaatooyin caafimaad oo qofka la soo daris noqda.
Xalka caafimaad: Cilmi-baadhis ay samaysay xarunta caafimaad ee la yidha Mayo Clinic oo ku taal magaalada Arizona ee dalka Maraykanka ayaa soo jeedisay in laydhka moobaylku uu yareeyo hurdada, gaar ahaan haddii qofku isticmaalo muddo dheer, balse waxa arrintan lagaga hortagi kara in aan qofku waqti badan isticmaalin telefoonka xilliyada uu hurdada u diyaar garoobaayo amma jiifo halkii uu seexan lahaa.
Telefoonku wuxuu saamayn ku yeesha xidhiidhka qofka
Telefoonnadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha fududeeya isgaadhsiinta bani’aadamka, balse sidoo kale waxay ka qaybqataan in lammaane aad isu jecla is furaan, hinaase uu sababo telefoonku dartii.
“Daraasadayadu waxay soo jeedisay in faceboook, Twitter iyo moobiladu dhib u keeni karaan xidhiidhka lammaanaha is jecel, lagana taxadiro in si badan loo isticmaalo,” ayuu yidhi Dr. Emma Short oo ka mid ah khubaro cilmi-baadhis arrintan ka samaysay oo ka tirsan Jaamacadda Bedfordshire.
Xalka: Iska xakamee amma sharci adag ka dhigo in aan waqtiyada aad xaaskaaga amma qofka aad jeceshay la joogto telefoonno badan kugu soo dhicin oo sababi kara in xidhiidhkiinu ku xumaado.
Moobaylku wejiga wuu bahdila
Isticmaalka badan ee telefoonku wuxuu waxyeeleeya wejiga, gaar ahaan daamanka oo uu kala dheereeyo qofka, isla markaana mararka qaar uu maqaarka ku keeno in finan badan ka soo baxaan sida ay sheegtay Dr. Sam Buntin oo ah khamiirad qurxinta dumarka ku takhasustay.
Xalka: Isku day inaad telefoonka aanad badsan amma aad u isticmaasho wax aan dhegaha iyo wejigaaga waxyeelayn sida sameecadaha oo aad codka u dheeli tirtay.
Previous: “Waan Ogahay, Ninkii Damac Ka Hayo Inuu Somaliland Khalkhal-Geliyo Oo Talo Muqdisho Leedahay Soo Dhex-Dhigo..” Cukuse
Next: Faa’iidooyinka iyo Dhibaatada ka Dhalan Kara Dhinacyada Bani’aadamku u Seexdaan